ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများတွင် ရေများခမ်းသဖြင့်် မီးပြတ်မည် - Thadin
HomeNEWSရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများတွင် ရေများခမ်းသဖြင့်် မီးပြတ်မည်
April 26, 2019 Admin Kwee NEWS Comments Off on ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများတွင် ရေများခမ်းသဖြင့်် မီးပြတ်မည်
၁။ ယခုအချိန်ကာလသည် ပူပြင်းခြောက်သွေ. သော နွေရာသီကာလသို.ရောက်ရှိနေပြီး ၊ရာသီဥတု အပူချိန်မှာ တစ်နေ.ထက်တစ်နေ. မြင်.တက်လျက်ရှိသဖြင်.ဓာတ်အား
စနစ် ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအဓိက ထုတ်လုပ်နေသော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများတွင်ရေများလျော.နည်းခန်းခြောက်လျက်ရှိရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုမှာလျော.နည်းကျဆင်းနေပါသည်။မိုးမရွာသွန်းမှီအချိန်အထိလျှပ်စစ်
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု လျော.နည်းနေမည်ဖြစ်ပါသဖြင်. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို. ဓာတ်အားပို.လွှတ်မှုနှင်. ဓာတ်အားဖြန်.ဖြူးပေးနိုင်မှုမှာလည်း လျော.နည်းနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ထို.ကြောင်. အပူချိန်စံချိန်တင်မြင်.တက်လျက်ရှိသော ယခုနှစ်နွေရာသ်ီကာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုဝန်အားများသည်.
Peak Load (နံနက်ပိုင်း (၀၉း၀၀)နာရီမှ (၁၁း၀၀)နာရီအ
တွင်း ၊ ညနေပိုင်း (၁၉း၀၀)နာရီ မှ (၂၀း၀၀)နာရီအတွင်း)
အချိ်န်များတွင် အချို သောဓာတ်အားလိုင်းများကို လိုအပ်ပါက အရေးပေါ်ယာယီ ဝန်အားလျော.သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်မှုဇုန်များ၊မြို.နယ်များ၊ရပ်ကွက်နေရာများတွင် အချိန်ပိုင်းဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ထိုကဲ.သို. အရေးပေါ်ဝန်အားလျော. ထိန်းညှိခြင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ ဓာတ်အားပိတ်ကြာမြင်.ချိန် အနည်းဆုံးတစ်နာရီ မှ အများဆုံး နှစ်နာရီအထိ ကြာမြင်.နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အရေးပေါ် ဓာတ်အားပိတ်ရာတွင်-
(က) စက်မှုဇုန်များသို. ဓာတ်အားပေးထားသောဓာတ်အားလိုင်းများကို ပထမအဆင်.အနေဖြင်. အချိန်ပိုင်းဓာတ်အားပိတ်ဝန်အားလျော.ပါမည်။
(ခ) အများပြည်သူနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်နေရာများကိုမူ လိုအပ်မှသာလျှင် အချိန်ပိုင်းဓာတ်အားပ်ိတ် ဝန်အားလျှော. မည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ)အများပြည်သူအရေးကြီးနေရာများ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု မရှိစေရေးကိုဆောင်ရွက်ပါမည်။
၄။ သို. ဖြစ်ပါ၍ ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် မိုးမရွာသွန်းမှီ
အချိန်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ အရေးပေါ် ဝန်အားလျှော. ထိန်းညှိခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသောကြောင်. ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများရှိလာနိုင်မှုအပေါ် နားလည်ခွင်.လွှတ်ပေးပါရန် အများပြည်သူထံသို. လေးစားစွာဖြင်.မေတ္တာရပ်ခံအသိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်။
၁။ ယခုအခြိနျကာလသညျ ပူပွငျးခွောကျသှေ. သော နှရောသီကာလသို.ရောကျရှိနပွေီး ၊ရာသီဥတု အပူခြိနျမှာ တဈနေ.ထကျတဈနေ. မွငျ.တကျလကျြရှိသဖွငျ.ဓာတျအား
စနဈ ၏ လြှပျစဈဓာတျအားကိုအဓိက ထုတျလုပျနသေော ရအေားလြှပျစဈစကျရုံမြားတှငျရမြေားလြော.နညျးခနျးခွောကျလကျြရှိရာလြှပျစဈဓာတျအားထုတျလုပျမှုမှာလြော.နညျးကဆြငျးနပေါသညျ။မိုးမရှာသှနျးမှီအခြိနျအထိလြှပျစဈ
ဓာတျအားထုတျလုပျမှု လြော.နညျးနမေညျဖွဈပါသဖွငျ. ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးသို. ဓာတျအားပို.လှတျမှုနှငျ. ဓာတျအားဖွနျ.ဖွူးပေးနိုငျမှုမှာလညျး လြော.နညျးနမေညျဖွဈပါသညျ။
၂။ထို.ကွောငျ. အပူခြိနျစံခြိနျတငျမွငျ.တကျလကျြရှိသော ယခုနှဈနှရောသျီကာလတှငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အတှငျး၌ လြှပျစဈဓာတျအားသုံးစှဲမှုဝနျအားမြားသညျ.
Peak Load (နံနကျပိုငျး (၀၉း၀၀)နာရီမှ (၁၁း၀၀)နာရီအ
တှငျး ၊ ညနပေိုငျး (၁၉း၀၀)နာရီ မှ (၂၀း၀၀)နာရီအတှငျး)
အခြိနျမြားတှငျ အခြို သောဓာတျအားလိုငျးမြားကို လိုအပျပါက အရေးပျေါယာယီ ဝနျအားလြော.သှားရမညျဖွဈပါသညျ။ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ စကျမှုဇုနျမြား၊မွို.နယျမြား၊ရပျကှကျနရောမြားတှငျ အခြိနျပိုငျးဓာတျအားပွတျတောကျမညျဖွဈပါသညျ။
၃။ ထိုကဲ.သို. အရေးပျေါဝနျအားလြော. ထိနျးညှိခွငျးဆောငျရှကျရာ၌ ဓာတျအားပိတျကွာမွငျ.ခြိနျ အနညျးဆုံးတဈနာရီ မှ အမြားဆုံး နှဈနာရီအထိ ကွာမွငျ.နိုငျမညျဖွဈပါသညျ။အရေးပျေါ ဓာတျအားပိတျရာတှငျ-
(က) စကျမှုဇုနျမြားသို. ဓာတျအားပေးထားသောဓာတျအားလိုငျးမြားကို ပထမအဆငျ.အနဖွေငျ. အခြိနျပိုငျးဓာတျအားပိတျဝနျအားလြော.ပါမညျ။
(ခ) အမြားပွညျသူနထေိုငျရာ ရပျကှကျနရောမြားကိုမူ လိုအပျမှသာလြှငျ အခြိနျပိုငျးဓာတျအားပိတျ ဝနျအားလြှော. မညျဖွဈပါသညျ။
(ဂ)အမြားပွညျသူအရေးကွီးနရောမြား ဓာတျအားပွတျတောကျမှု မရှိစရေေးကိုဆောငျရှကျပါမညျ။
၄။ သို. ဖွဈပါ၍ ယခုနှဈနှရောသီတှငျ မိုးမရှာသှနျးမှီ
အခြိနျကာလအတှငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၌ အရေးပျေါ ဝနျအားလြှော. ထိနျးညှိခွငျးမြားဆောငျရှကျရမညျဖွဈပါသောကွောငျ. ယာယီဓာတျအားပွတျတောကျမှုမြားရှိလာနိုငျမှုအပျေါ နားလညျခှငျ.လှတျပေးပါရနျ အမြားပွညျသူထံသို. လေးစားစှာဖွငျ.မတ်ေတာရပျခံအသိပေးပနျကွားအပျပါသညျ။
This Year : 232737
Total Users : 591761
Total views : 2715075